अबैध शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई फेरी १५ दिने अल्टिमेटम - Health Today Nepal
अबैध शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई फेरी १५ दिने अल्टिमेटम
November 11th, 2019 समाचार0comments
काठमाडौ,२५ कात्तिकः सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क असुलेका मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पुनः १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरुले तोकेभन्दा बढी असुलेको शुल्क फिर्ता गर्न पटक–पटक दिएको अल्टिमेटम उल्लंघन गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । आइतबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित सम्बन्धित अधिकारीको बैठकले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न १५ दिन समय दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. रामकण्ठ माकाजू, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलगायत थिए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निर्णयको माइन्युट भएपछि सार्वजनिक गर्ने बताए । विद्यार्थीसँग उठाएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न ८ चैत ०७५ मा सरकारले एकमहिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, कलेजहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसपछि चितवन मेडिकल, पोखरा मेडिकललगायतलाई विद्यार्थीसँग सहमति गराएर जिल्ला प्रशासनबाट अल्टिमेटम दिइँदै आएको छ ।
फेरि पनि अटेर गरेपछि ६ असोजमा गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायतको बैठकले सबै निजी मेडिकल कलेजलाई एकमहिने अल्टिमेटम दिएको थियो । नटेर्ने कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर, अझै टेरेनन् । ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको सरकारले अल्टिमेटम अवधि सकिएको १८ दिनपछि आइतबार फेरि १५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ ।
बढी शुल्क असुलेको विरोधमा पढ्न छाडेर विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । विद्यार्थी ठग्ने कलेजलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकार उल्टै विद्यार्थीमाथि दमनमा उत्रिँदै आएको छ । आ–आफ्नो कलेजको प्रांगणदेखि सिंहदरबारको प्रांगण माइतीघरसम्म चिच्याउँदा पनि पीडित विद्यार्थीले न्याय पाएका छैनन् ।
सरकारले एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग काठमाडौं उपत्यकाका कलेजलाई ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउन मापदण्ड तोकेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजपिच्छे चर्को शुल्क असुली गरेका छन् । सरकारले तोकेको शुल्कमा पठनपाठनमा लाग्ने ट्युसन, ल्याब, लाइब्रेरीदेखि सम्पूर्ण शुल्क समावेश गरिएको छ । तर, कलेजहरूले विभिन्न शीर्षक तोकेर शुल्क असुलेका छन् ।
Previous article स्वास्थ्यकर्मी संघको अध्यक्षमा घिमिरे,अरु पदमा को–को निर्वाचित भए ? (मतसहित)
Next article अनसनरत डा.केसीको जीवन रक्षार्थ तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न चिकित्सक संघको माग